Gịnị bụ mmiri ozuzo: njirimara, nhazi na ụdị | Meteorology netwọkụ
Gịnị bụ mmiri ozuzo
Portillo nke German | 30/09/2021 10:00 | Meteorology
Mmiri na -ama anyị nke ọma ugboro ugboro ma ọ bụ na -emeghị ugboro ugboro dabere na ebe anyị nọ. Agbanyeghị, ọtụtụ mmadụ amaghị kedu ihe mmiri ozuzo na otu esi eme ya. Igwe ojii mejupụtara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obere ntụpọ mmiri na obere kristal ice. Mpempe mmiri ndị a na obere kristal ice na -abịa site na mgbanwe steeti site na vepo mmiri gaa na mmiri mmiri na nke siri ike na oke ikuku. Oke ikuku na -ebili wee jụkwaa oyi ruo mgbe ọ ga -ejupụta wee ghọọ ụmụ irighiri mmiri. Mgbe igwe ojii juputara na ụmụ irighiri mmiri na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma maka ya, ha na -ebute n'ụdị ice, snow ma ọ bụ akụ mmiri igwe.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe mmiri ozuzo bụ, ihe njiri mara ya na mbido ya.
1 Kedu ihe bụ mmiri ozuzo na kedu ka esi etolite
2 Ofdị mmiri ozuzo
3 Mmiri na -ezo dịka ụdị igwe ojii si dị
Kedu ihe bụ mmiri ozuzo na kedu ka esi etolite
Mgbe ikuku dị n'elu kporo ọkụ, ịdị elu ya ga -abawanye. Ọnọdụ okpomọkụ nke troposphere na -ebelata ka elu na -abawanye, ya bụ, ka anyị na -aga, oyi na -atụ, yabụ mgbe oke ikuku na -ebili, ọ na -akụ ikuku oyi wee jupụta. Mgbe afọ juru ya, ọ na -abanye n'ime obere mmiri ma ọ bụ kristal wee gbaa obere ụmụ irighiri nwere dayameta na -erughị micron abụọ, nke a na -akpọ hygroscopic condensation nuclei.
Mgbe ụmụ irighiri mmiri na -arapara na njupụta ikuku na ikuku ikuku dị n'elu na -aga n'ihu na -ebili, igwe ojii na -eto eto ga -etolite, n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ikuku juru eju na nke mechiri emechi ga -emesịa mụbaa n'ịdị elu. A na -akpọ ụdị igwe ojii a site na enweghị ikuku na -eme ka a na -akpọ cumulus humilis, na mgbe ha toro n'ụzọ kwụ ọtọ wee rute oke ọkpụrụkpụ (nke ga -eme ka ikuku radieshon anyanwụ gafee), a na -akpọ ha igwe ojii cumulonimbus.
Maka uzuoku n'ime ikuku ikuku juru eju ka ọ banye na mmiri mmiri, a ga -emerịrị ọnọdụ abụọ: otu bụ na ikuku ikuku ajụbala nke ọma na nke ọzọ bụ na e nwere nuclei na -amịkọrọ mmiri n'ime ikuku.
Ozugbo igwe kpụkọtara, gịnị na -egbochi ha iwepụta mmiri ozuzo, akụ mmiri igwe ma ọ bụ snow, ya bụ, ụdị mmiri ozuzo? N'ihi mmelite ahụ, obere ntakịrị mmiri nke etolitere ma kwụsịtụrụ n'igwe ojii ga -amalite ito, na -efu mpekere ndị ọzọ ha na -ahụ mgbe ha na -ada. N'ụzọ bụ isi, ike abụọ na -arụ ọrụ na dobe ọ bụla: nguzogide na -eme na ya site na ikuku na -arị elu na ịdị arọ nke dobe n'onwe ya.
A na -enye ụdị mmiri ozuzo dị ka ọrụ nke ọdịdị na nha nke ntụpọ mmiri na -ebute mgbe ezutere ọnọdụ ziri ezi. Ha nwere ike ịbụ mmiri mmiri ozuzo, mmiri ozuzo, akụ mmiri igwe, snow, mmiri ozuzo, mmiri ozuzo, wdg.
Mgbapu mmiri bụ a obere mmiri ozuzo, nke ụmụ irighiri mmiri ya dị obere ma na -adakọba. N'ozuzu, ụmụ irighiri mmiri ndị a adịghị eme ka mmiri dị mmiri mmiri nke ukwuu, kama ọ dabere n'ihe ndị ọzọ dịka ọsọ ikuku na iru mmiri.
Mmiri ịsa ahụ bụ nnukwu mmiri mmiri nke na -adakarị n'ike n'ike. Mmiri na -ezokarị na -eme ebe nrụgide ikuku na -ada wee bụrụ etiti nke nrụgide dị ala a na -akpọ oke mmiri ozuzo. Mmiri ozuzo na-emetụta ígwé ojii yiri cumulonimbus nke na-eto ngwa ngwa, ya mere, ụmụ irighiri mmiri na-ebuwanye ibu.
Mmiri ozuzo nwekwara ike ịdị n'ụdị siri ike. Maka nke a, kristal ice ga -etolite n'igwe ojii karịa igwe ojii, ọnọdụ okpomọkụ dịkwa obere (ihe dịka -40 Celsius C). Kristal ndị a nwere ike itolite na oke oke okpomọkụ na -efu ụmụ irighiri mmiri (mmalite nke akụ mmiri igwe) ma ọ bụ site n'ịgbakwunye kristal ndị ọzọ iji mepụta snowflakes. Mgbe ha ruru nha kwesịrị ekwesị yana n'ihi ike ndọda, ọ bụrụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma, ha nwere ike hapụ igwe ojii wee mepụta oke mmiri ozuzo n'elu.
Mgbe ụfọdụ snow ma ọ bụ akụ mmiri igwe na -esi n'igwe ojii apụta, ma ọ bụrụ na ọ hụ ikuku oyi na -ada n'oge ọdịda, ga -agbaze tupu ya eruo ala, na -emecha bute mmiri mmiri.
Mmiri na -ezo dịka ụdị igwe ojii si dị
Ụdị mmiri ozuzo na -adaberekarị na ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke igwe ojii na ụdị igwe ojii a kpụrụ. N'okwu a, ụdị mmiri ozuzo a na -ahụkarị bụ ihu ihu, ihu igwe na -ekwu okwu ma ọ bụ ụdị ebili mmiri.
Mmiri na -ezo n'ihu bụ mmiri ozuzo metụtara igwe ojii na ihu (na -ekpo ọkụ na oyi). Mkparịta ụka dị n'etiti ihu na -ekpo ọkụ na ihu ihu oyi na -etolite ígwé ojii ma na -emepụta mmiri n'ihu. Mgbe nnukwu ikuku oyi na -akwali elu ma na -akpali oke ọkụ, ihu ihu na -amalite. Ka ọ na -ebili, ọ ga -ajụ oyi wee mepụta igwe ojii. N'ihe dị n'ihu ihu, ikuku ikuku na -efe n'elu ikuku jụrụ oyi.
Mgbe nguzobe ihu oyi pụtara, ọ na -adịkarị ụdị ígwé ojii na -eme bụ a Cumulonimbus ma ọ bụ Altocumulus. Igwe ojii ndị a na-enwe mmepe dị elu karị ma, ya mere, na-ebute oke mmiri ozuzo dị elu ma dị elu. Ọzọkwa, oke nke ụmụ irighiri mmiri dị ukwuu karịa nke na-etolite na ihu ọkụ.
Igwe ojii nke na-etolite n'ihu ihu na-ekpo ọkụ nwere ọdịdị dị nkenke karịa ma na-adịkarị Nimboestratus, Stratus, Stratocumulus. Dị ka ọ na -adị, mmiri ozuzo na -eme n'ihu ndị a dị nro, nke ụdị mmiri mmiri.
N'ihe banyere mmiri ozuzo site na oké ifufe, nke a na-akpọkwa 'usoro nchịkwa', igwe ojii nwere ọtụtụ usoro mmepe (Cumulonimbus) maka nke ga-emepụta oke mmiri ozuzo na obere oge, na-abụkarị oke mmiri ozuzo.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe mmiri bụ na ihe njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Gịnị bụ mmiri ozuzo
Kedu otu esi akpụ ụzarị ọkụ